दान : आज पीडितमाथिको खेलाँची भयो ! « Ok Janata Newsportal
काठमाडौं । भनिन्छ, दान प्रचारप्रसार गरेर होइन, मन भित्रैबाट गरिने सहयोग हो । आफू पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएपछि होस् या आत्मा शान्तीका लागि होस् हरेक मानिसले कुनै न कुनै ढंगले दान गरिरहेकै हुन्छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, अशक्त, असहायलाई दान गरिन्छ । दान पुण्य प्राप्तिका लागि गरिन्छ । तर अहिले दान दिनका लागि होडबाजी चल्छ र सामाजिक सञ्जालका भित्ता रङ्ग्याइन्छन् ।
अहिले राजनीतिक दलका नेता हुन् या सामाजिक अभियन्ता सबैले लोकप्रियताका नाममा दान गर्ने शैली नै परिवर्तन गरेका छन् । राजनीति गर्ने मान्छेले जनताका समस्यालाई बुझेर नीतिगत रुपमा सहयोग गर्ने पाटो एक हो । तर, यहाँ देखावटी दान गर्ने र पीडितलाई सामाजिक रुपमा झन कमजोर तुल्याउने प्रपञ्च भइरहेको हुन्छ ।
दान के हो ?
सरल अर्थमा दान भनेको दिनु हो । तर दान कसलाई दिने ? के दिने ? कहाँ दिने ? यसको परिभाषा जान्न जरुरी छ । गाई दान, भूमिदान, सुनदान आदि पनि दान गरिन्छ । कन्यादान, वीर्यदान, मतदान, रक्तदान, श्रमदान यी पनि दानकै परिभाषाभित्र पर्छन् ।
बलिदान पनि महत्वपूर्ण दान हो । दानको अर्को अर्थ त्याग गर्नु भन्ने हुन्छ । भोकालाई अन्नदान, नाङ्गालाई बस्त्रदान, दृष्टिविहीनलाई आँखा दान, निर्माणका लागि श्रमदान, गल्ति गर्नेकालागि क्षमादान आदि महादान हुन् ।
हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दु धर्म दर्शनमा दान दिँदा ध्यान दिएर र विचार पु¥याएरमात्रै दिनु भनिएको छ । देश काले च पात्रे च तददानं सात्विकम् स्मृतम्ः दान पनि राजसी, तामसी, स्वात्विक हुन्छन् भने स्वात्विकी दान नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर बताइएको छ ।
जुन दानमा कुनै स्वार्थ हुदैन र केवल परोपकार मात्रै हुन्छ त्यो दानलाई सात्विकी दान भनिएको छ ।
दानका केही उदाहरण :
मतदान : देश भनेको स्वदेशी, काल भनेको मतदान गर्ने समय, पात्र भनेको असल चरित्रवान सक्षम नेता ।
कन्यादान : स्वदेशी नागरिकता, काल, समय, शुद्ध लग्न, मुहूत पात्र, चरित्रवान गुण सम्पन्न वर ।
रक्तदान : स्वदेश, मानव संकट समय पात्र, जीवनदान पाउन छट्पटिएको बिरामी ।
भिक्षा दान : घर गृहिणीले दिने जिन्सी अनाज वा नगद दान हो । स्मरण होस् सीतामाइले लक्ष्मणरेखा बाहिर गएर भिक्षा दिने क्रममा रावणले उनलाई अपहरण गरेको थियो । यस घटनाले के पुष्टि गर्दछ भने दान गर्दाको सीमा रेखा हुनुपर्दछ भन्ने जनाउँछ ।
अहिले मानिस अन्तिम विकल्पका रुपमा दानी बनेर कसैको आत्मसम्मानलाई ठेस पुर्याइरहेका भेटिन्छन् । निस्वार्थ, निस्फिक्री रुपमा दान गरौँ । अस्पतालका बेडमा रहेका बिरामीको सामाजिक अवमूल्यन नगरौँ !!!
बालकोट बार्दलीबाट ओली कराएपछि माधव नेपालको कडा निर्णय